Jadwalka Iskuxidhka Warshada Fidiyaha | Shaxda Iskuxidhka Shiinaha fidiya Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Nooca dharka miiska, oo sidoo kale loo yaqaan daboolka miiska fidsan, ayaa ku habboon dhacdooyin kasta oo gaar ah, bandhig ganacsi, shirar ama hool bandhig. Gunta-godka-gadaal wuxuu bixiyaa furitaanka xaga dambe si aad u fariisato miiskaaga gadaashiisa adigoon carqaladeynin jadwalka miiska.
Wareeg miiska Wareejinta Wareejinta
Wareejinta miiska wareega wareega waa xulasho weyn oo ka dhigaysa miiskaaga dhacdada inay u ekaato mid fiiqan oo muuqaal leh. Sidoo kale, waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo miiska dusha sare ee duugista iyo jeexjeexa maalin kasta, gaar ahaan dib ugu noqoshada iyo dib u dhacyada iyo bandhigyada ganacsiga.
La imaada cabirro kala duwan, miisaska gogol xaadhka miisaanka caadada u ah waa hab kharash-ku-ool ah oo lagu soo bandhigo miis soo jiidasho leh.
Jadwalka Isku-fidinta Jadwalka Isweydaarsiga
Kala duwanaanta daboolida miiskan fidsan ayaa awood kuu siinaysa inaad bedesho muuqaalka miisaskaaga isla markaaba adigoon iibsan alaabooyin dheeri ah. Daboolka miisaska iskutallaabta ah ayaa ku habboon bandhigyo kala duwan, shirar, shirar iyo bandhigyo ganacsi tan iyo markii miisaskan gaarka ah ee la tuuro ay leeyihiin dhinac loo rogi karo maaddaama qalabka fidsan loo soo jiidayo si loo daboolo lugaha miiska.
Jadwalka Kala-Bixida Oo Dib Ugu Laabanaya Jiinyeer
Shaxda miiska weyn ee loo yaqaan 'spandex tablecloth' waxaa ku jira dib-u-soo-celin buuxda oo leh xiridda jiinyeer, kaa caawineysa awoodda aad ku leedahay meel bannaan oo dheeri ah oo lagu keydiyo hoosta. Haddii aad ka walwalsan tahay nabadgelyada carwooyinka ama meelaha dadku ku badan yahay, markaa miiska miiska loo yaqaan 'spandex miiska' oo leh jiinyeer dhabarka ah ayaa lagu taliyay inay noqdaan xulasho wanaagsan maadaama aad ku xiri kartid waxyaabaha muhiimka ah gudaha.
Miisaska Wareejinta Wareegga
Ka samaysan dhar caag ah oo tayo sare leh oo midabbo kala duwan leh, miisaska fidsanna waxay ku darayaan muuqaal soo jiidasho leh, mihnad leh miisaska munaasabadda iyadoo la siinayo dusha sare ee kor loogu qaadayo ganacsigaaga daabacaad gaar ah oo muujineysa astaantaada ama farriinta xayeysiinta si loo abuuro dheeri ah saamaynta ay qolkaaga.
Noocan daboolka miiska spandex wuxuu ku habboon yahay dhacdooyinka gaarka ah, shirarka, bandhigyada ganacsiga, guryaha furan, carwooyinka iyo xitaa dabaaldegyada shaqsiyeed. Ka samaysan dhar tayo sare leh oo ka samaysan dharka caagga ah oo midabyo kala duwan leh, fidinta miisaska miisaanka ganacsiga ayaa ku daraya muuqaal qurux badan oo miisaskaaga ah oo soo bandhigi kara astaantaada ama farriimaha xayeysiinta ah si aad ugu abuurto saameyn dheeraad ah qolkaaga.